Kalki Koechlin, Diana Penty Iyo Atirishooyinka Todobaadkan Ugu Labiska Xun (+Sawiro) – Filimside.net
Kalki Koechlin, Diana Penty Iyo Atirishooyinka Todobaadkan Ugu Labiska Xun (+Sawiro)
Ugu dambeyn waa lasoo bandhigay atirishooyinka Bollywoodka kuwooda ugu labiska xun todobaadka ayago labis aan soo jiidasho leheen fagaarha la imaadeen xiliyo kala duwan.
Kalki Koechlin iyo Diana Penty ayaa noqdeen kuwa labiska foosha xun laga soo qabtay todobaadki lasoo dhaafay ayagoo labis aan shidneenfagaaraha la yimaaden hogaankana u hayaan atirishooyinka todobaadka ugu labiska xun.
Ayadoo shalay aan idiin la wadaagnay atirishooyinka ugu labiska wanaagsan todobaadka haatana waxaa lasoo bandhigay kuwa ugu labiska xun todobaadka sida la wada sugaayeyba.
Dhanka kale sawiradan waxaa laga soo qabtaa xiliyo kala duwan ayagoo goobo kala duwan kusugann waana mid qiimeyn lagu sameeyo kadibna waxaa lasoo saara todobaad walba kuwa ugu labiska wanaagsan iyo kuwa ugu labiska xun intaba.
Hadii maanta aan wada arkeeno atirishooyinka ugu labiska xun maalinti shalay ahedna kuwa ugu Fashion-ka wanaagsan ayaan wada daawanaya waana arin lagu kala saaro atirishooyinka labiskooda maalmaha sabtida iyo axada todobaad walba..
Fadlan halkaan hoose ka daawo sawirada atirishooyinka todobaadka ugu labiska xun kuwaaso fagaaraha labis aan soo jiidasho leheen la imaadeen Fashion-kana ka halaaway..
Waxaa Aqrisay 306